Ministira Afgaanistaan duraanii gara Jarman godaanuun hojii nyaata deddeebisuun qaxaraman
3 months ago 635 Qoodi
Ministira Komunikeeshinii Afgaanistaan duraanii kan turan Saayid Saadaat gara Jarmanitti godaananii hojii nyaata Biskileetiin deddeebisu irratti qaxaramanii hojii jalqabaniiru.
Saadaat akka jedhanitti, "namoonni hojii kana waanan hojjedheef na qeequuf yaalu garuu ani hojii koo kana hojjechuu kootif balleessummaan natti hin dhaga'amu. Aanga'oonni biroos ofii dhokfachuu dhiisanii fakkeenyummaa koo yoo hordofan gaariidha," jedhaniiru.
Maatiin Ministirichi ammallee Afgaanistaan keessatti akka argamanii fi yeroo dhiyootti biyyatti keessaa akka bahan abdii akka qaban Roytarsiif himaniiru.
Saadaat gara Jarman ji'a Muddee darbe kan godaanee yoo ta'u, biyyattii keessatti hojii argachuuf Afaan biyyatti baruun dirqama waan ta'eef ogummaa ittiin barateen (Information Technology and Telecom) hojii argachuu waan hin dandeenyeef of jiraachisuuf hojii isa amma irratti bobba'ee akka jiru hime.
Mootummaan Afgaanistaan Ashraaf Gaaniin hogganamu gareen Taalibaan biyyattii humnaan to'achuusaa hordofee ture mootummaa seera qabeessa biyyattii kan diigame. Sababa kanaanis Ashraaf Gaanii gara biyya Uzbeekistaan kan godaanan yoo ta'u, mootummaan Ameerikaa loltoota isaa erga baasee booda loltoonni Taalibaan magaalaa guddittii biyyattii Kaabuul to'ataniiru.
Jarman Siyaasa addunyaa Afgaanistaan
Chaayinaan ''addunyaan garee muraasaan hin bultu'' jechuun biyyoota G-7'tti dhaadatte
April 17, 2020, 3:47 p.m.
COVID-19: 'Weerarri Covid-19 Jarman keessatti to'atameera' - Ministira Fayyaa Jarman